CAN 2019: saacad, telefishanka, koofiyadaha, soo qaad macluumaadka - TELEEXAADKA
ACCUEIL » SPORTS »WAXAAD AKHRISO: saacad, telefishin, koofiyado, wararka barashada
CAN 2019: saacad, telefishanka, koofiyadaha, wararka barashada
XIDIGAHA LA RIDAY LA SOO JE KOOBAN: - Isku aadka Koobka Qaramada Afrika ee Koobka Qaramada Afrika ayaa Jimcaha qabsoomi doona. TV-ga, wareejinta ... Kanigee kan iyo waqtiga loo baahan yahay in la arko munaasabadda TV-ga? Sidoo kale ka ogow koofiyadaha, taariikhda ciyaarta iyo wakhtiyada finalka.
Markaasaa dalalkii oo dhammu ay [Updated April 10 2019 in 18h56] baxday 2019 CAN ugu hammuun sugaya natiijooyinka isku aadka wajiga ugu danbeeya ee tartanka African Cup of Nations oo lagu qaban doono sanadkaan ee Masar . Dhibaatadu waxay si dhakhso ah u imaan doontaa dhammaadka munaasabadda wareegga koowaad ee kooxaha wareega koowaad ee jadwalka Jimcaha 12 APRIL 2019 waxayna bilaabi doontaa 20h, waqtiga french. Xasuuso in dib-u-noqoshada barashadan la soo jeedin doono in laga soo bilaabo 19h45 on beIN Sports channel 3Idaacadda ayaa Qatar la soo yeeri, Idaacadda rasmiga ah ee tartanka on ciidda Faransiis. Xaflada, faahfaahinta oo aan weli sifeeyo lagu hoggaamin doonaa on hawada by wariye Smail Bouabdellah iyo la taliye Brahim Thiam, ciyaaryahanka kubadda cagta hore, iyo dhammaan doontaa agagaarka saacadood 22. Si aad u socotid, waa inaad u jeestaa mashiinka beIN Connect.
Xeerarka isku aadka loogu 2019 CAN ee go'aaminta ka kooban oo ka mid ah balliyo wajiga ugu danbeeya ee koobka Afrika ee Masar waa in la Shirbow classic. Lix kooxood ayaa la kicin doonaa waxayna ku jiri doonaan koofigii kowaad. Waxay wajahayaan koox hat 2, hat iyo hat 3 4. Dhibaato, laba cisho oo ka mid ah isku aadka, isugeynta koofiyadan ayaa weli lama yaqaan. Iyadoo wararka xanta ah ayaa soo muuqday warbaahinta on Tuesday, CAF (African Football Confederation), soo bixiyey diidmada ah oo sheegaya in si gaar ah in "habka barbaro ee Total CAN ah, Masar 2019 la soo bandhigay Guddiga ' Ururka Ururka Cuntada iyo ansixinta Guddiga Fulinta ".
Koobka African Cup of Nations ayaa la qabtay bishii Janaayo, labadii sano ee la soo dhaafay, sanado qaali ah, ma ahan in uu ku dhaco Koobka Aduunka ama Euro, lakiin taasi waxay noqon kartaa CAN 2019, taariikhaha ayaa murugeysan: tartanka waxaa la ciyaari doonaa waqtigan xagaaga, laga bilaabo 15 Juun ilaa 13 July 2019, gaar ahaan in aan lagu ciqaabin ciyaartoyda ka ciyaaraya horyaalada yurub. Xidhiidhka Kubadda Cagta ee Africa ayaa si kastaba ha ahaatee u muujiyay in barnaamijkani aanu wakhti go'an ku jirin iyo in dib loogu celiyo taariikhda qaboobaha aan laga saarin mustaqbalka.
Koobka qaramada Afrika ee 2019 wuxuu ka dhacayaa labo marxaladood: 15 26 June, kadibna finalka wareega 16ka, quarter-finals, semifinals, final iyo ciyaarta kaalinta 3aad. Labada kooxood ee ugu sareeya koox kasta iyo seddexaad seddexaad ayaa u qalma wareega quarter-finalka. Xilliga khadka dhexe, shuruudaha soo socda ayaa loo isticmaalaa si ay u go'aansadaan inta u dhaxeysa: dhibcaha ugu badan ee la helay intii ay socotay ciyaartii labada kooxood, kadibna goolasha ugu fiican ee goolal dhalinta, markaas weerarka ugu fiican. Haddii labada wadan ay weli xiran yihiin, barbaro ayaa la qabtaa. Jadwalka dhabta ah waxaa la ogaan doonaa Nofeembar 12, ka dib barbardhigga.
Digaagga wajiga ugu dambeeya ee kan 2019 ayaa la dhisi doonaa in 12 barbar dhac April 2019. Lix kooxood oo ka mid ah afar dal, oo ka soo jeeda koofiyado kala duwan, ayaa la abuuri doonaa munaasabadan. Natiijadu waxay sidoo kale u ogolaan doontaa xulasho kasta in uu ogaado barnaamijkiisa buuxa iyo taariikhda cayaaraha ee koobka qaramada Afrika.
Si aad u daawato ciyaaraha 2019 Africa Cup on TV, waa inaad tagtaa beIN Sports. Wargeyska dhammaan cayaaraha waxaa lagu soo bandhigi doonaa daawadayaasha, kanaaladaha kala duwan ee warbaahinta (beIN Sports 1 channel, beIN Sports 2 ...). Sida caadiga ah, socodka ayaa laga heli doonaa beIN Connect, oo sidoo kale loogu talagalay macaamiisha.
Qodobo afar iyo labaatan dal ayaa uqalantay finalka Koobka Qaramada Afrika ee 2019. Halkan waxaa ku qoran liiska u tartami guul 2019 ee CAN: Koonfur Afrika, Algeria, Angola, Benin, Burundi, Cameroon, Ivory Coast, Masar, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar, Mali, Morocco, Mauritania, Namibia, Nigeria, DR Congo, Senegal, Tanzania, Tunisia iyo Zimbabwe.
Inta badan maqaalkii akhriska - Kiis cusub oo rabshad bilays ah? > Arag news
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.linternaute.com/sport/foot/1333637-can-2019-date-heure-et-diffusion-tv-du-tirage-au-sort/
Cabashada CCA ee ka dhanka ah doorashooyinka FECAFOOT: naadiyada hiwaayadda ayaa cambaareeyay
Roger Milla ayaa doonaya Japoma Stadium in loo magacaabo isaga kadib